ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု တပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ - Xinhua News Agency
ငလျင်ဒဏ်သင့်ခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ် ကျိုကျိုက်ကိုး ရှုခင်းသာခရီးသွားနေရာ ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက် အပြည့်အဝ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ (SCO)က အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ပြုလုပ်
တရုတ်နိုင်ငံက “ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး” ခွဲထွက်ရေးအင်အားစုများကို ထောက်ခံမှုရပ်တံ့ရန် အမေရိကန်အား တိုက်တွန်း
တူရကီနိုင်ငံ၌ ဆီးရီးယားဒုက္ခသည် ၃ ဒသမ ၇ သန်းကျော်ရှိ
အမေရိကန် King ကောင်တီရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦး J&J ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ သွေးခဲရောဂါဖြင့်သေဆုံး
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ငှက်ဖျားရောဂါ ကာကွယ်ဆေးအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုရန် WHO ထောက်ခံ
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ဖူမီအို ခီရှီဒါ အစိုးရအဖွဲ့သစ် ဖွဲ့စည်း
အမေရိကန်ရေတပ်က တစ်စင်းလျှင် ဒေါ်လာ ၁ ပြားစီဖြင့် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟောင်းနှစ်စင်းကို သင်္ဘောဖျက်ကုမ္ပဏီထံ ရောင်းချ
ရေနံယိုဖိတ်မှုကြောင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာ
Asia CHINA မြန်မာ-ENG
တရုတ်နိုင်ငံက အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသို့ အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ လှူဒါန်း
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ကိုပင်ဟေဂင်မြို့သို့ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ရောက်ရှိလာစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကိုပင်ဟေဂင် ၊ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု တပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရမှ လှူဒါန်းသော Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ သည် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ကိုပင်ဟေဂင်မြို့သို့ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့၌ Sinopharm ကာကွယ်ဆေးပုလင်းတစ်လုံးအား ဇွန် ၁ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့၌ မေ ၃၁ ရက်တွင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက Sinopharm ကာကွယ်ဆေး ထုတ်ပိုးမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါ လှူဒါန်းပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားအား စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းကာကွယ်ဆေးများအား ကုလသမဂ္ဂ စနစ်မှတစ်ဆင့် ရှေ့တန်းရှိ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် အနီးကပ် မိတ်ဖက်များအား စောနိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာ ဖြန့်ဝေသွားရန် မျှော်လင့်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ လှူဒါန်းမှုအား အာဖရိကမစ်ရှင်ဧရိယာတွင် အခြေခံဦးစားပေးအနေဖြင့် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ၏ ဒုတိယအကြီးအကဲ Zhang Maoyu က လှူဒါန်းပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ လှူဒါန်းမှုသည် ကပ်ရောဂါအား တုန့်ပြန်ရန် ကုလသမဂ္ဂ စွမ်းဆောင်ရည်အား မြှင့်တင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ တာဝန်များ နှင့် မစ်ရှင်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် ကူညီသွားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ကုလသမဂ္ဂ၏ လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Christian Francis Saunders ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ (Xinhua)
COPENHAGEN, Sept. 20 (Xinhua) — A consignment of China’s Sinopharm COVID-19 vaccines arrived on Monday in Copenhagen as the Chinese government’s donation for United Nations Peacekeeping personnels.
The delivery ceremony of the donation was held virtually last Friday and those vaccines are expected to be distributed to front-line personnel and close partners through the UN system as soon as possible.
The Chinese donation will be used in the African mission area onapriority basis, said Zhang Maoyu, deputy head of the China International Development Cooperation Agency, at the delivery ceremony.
China’s donation will enhance the UN capacity to respond to the epidemic and help peacekeepers better fulfill their duties and missions, according to Christian Francis Saunders, UN’s Assistant Secretary-General for Supply Chain Management.
Photo 1 – China’s Sinopharm COVID-19 vaccines arrived in Copenhagen, capital of Denmark, on Sept. 20, 2021. (Xinhua/Lin Jing)
Photo2– Photo taken on June 1, 2021 showsavial of the Sinopharm vaccine in Beijing, capital of China. (Xinhua)
Photo3– A staff member checks the packaging of the Sinopharm vaccines in Beijing, capital of China, May 31, 2021. (Xinhua)■